Geeri - Wikipedia
Kani waa maqaal ku saabsan guud ahaan dhimashada.
Boga "dhimasho" halkan ayaa laga soo toosiyay.
Geeridu sidoo kale loo yaqaano dhimasho (Af Ingiriis : death; Reer aw xasan waa beel kamid ah‎) waa marka naftu ka baxdo jidhka noole. Sharaxaada Sayniska ee geerida, sidoo kale loo yaqaano dhimasho, waa dhamaadka shaqada bayoloji ee suurtagelisa nolosha walax nool. Taasi micnaheedu waa istaagayso wada shaqeynta xubnaha jidhka iyo wixii ku dhexjira. Sida caadiga ah dhimashada waxaa keena waxyaabo badan waxaana ugu caansan gabowga, nafaqodarada, xanuunada, isdilitaanka (suicide), xasuuqida ama dilka (homocide), gaajada iyo baahida, biyola'aanta sidoo kale loo yaqaano haraadka, shilka, dhaawaca iyo wixii la halmaala.
Qolofka dadka oo sida badan loo isticmaalo astaanta dhimashada
Jidhka noolaha geeriyooday wuu qudhma isla wakhtiyar ka dib dhimashada, wuxuuna ku darsamaa carada. Laakiin waxaa mudo dheer sii jira lafaha iyo ilkaha kuwaasi oo meelaha qaar la helo lafo ama ilko jira kumanaan sano.
Guud ahaan geeridu waa mid xaq ah, sida diinta Islaamka ah ku xusan qof walba sugaysa. Geeridu waa albaabka iyo wadada nolosha aakhiro, waa mid lama huraan ah. Sidoo kale dhimashado waa arin murugo badan, naxdin, welwel, cabsi, iyo marooradilaac ku keenta qoyska iyo qaraabada laga geeriyooday. Guud ahaana waa mid aadamuhu neceb yahay.
Sidaas daraaddeed markaannu dhimanno, jiritaankeenna wuu dhammaadaa. Kuwii dhintay ma fekeri karaan, wax ma sameyn karaan oo waxna ma dareemi karaan.
Waxaa taariikhda lagu sheegay in tirada dad ah ee dhimatay tan iyo biloowgii aadamaha ay ka badan tahay tirada maanta nool. Taas macnaheedu waa in dad ka badan 7 bilyan (dadka maanta ku nool aduunka) ay horey u geeriyoodeen.
Dhimashadu waa cadow oo kale. Boqortooyada Ilaahay baa dhimashada baabbiʼin doonta. Ma aha inaan ka cabsanno kuwa dhintay. Kuwa dhintay waxba ma oga, waxba ma dareemaan, ma ina arki karaan, waxba ma ina gaarsiin karaan. Ma aha inaan caabudno kuwa dhintay. Yehowah wuxuu leeyahay awoodda uu kuwa dhintay ku soo sarakiciyo. Dhowaan dunida jannay noqon doontaa. Kuwii dhintay waa la soo sarakicin doonaa. Mar dambe ma jiri doonaan gaboobid, curyaannimo iyo dhimasho.
Maxaa Nagu Dhici Doono Markaan Dhimanno?
↑ Leda Zimmerman. Must all organisms age and die? Massachusetts Institute of Technology School of Engineering; 19 October 201O
↑ Online Etymology Dictionary, 2013
↑ Dhimashada Kaddib Maxaa Dhaco?
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Geeri&oldid=220314"
Last edited on 18 Oktoobar 2021, at 19:14
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 18 Oktoobar 2021, marka ee eheed 19:14.